Dhulgariir ruxay koonfurta galbeed Iswiidhan. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhulgariir ruxay koonfurta galbeed Iswiidhan.
La daabacay måndag 6 augusti 2012 kl 09.34
Sawir dusha ah oo muujinaya xeebta galbeed ee Iswiidhan. Foto: Björn Larsson Ask/Scanpix.
Dhulgariir ayaa saakay ku dhuftay badda u dhaxeysa Iswiidhan iyo Denimark iyada oo heerka wooda dhulgariirka lagu qiyaasay 4,4 ee habka cabirka dhulgariirada. Xudunta ruxanka dhulka ayaa waxay aheyd meel 61 kiilo mitir galbeedka kaga aadan magaaladda Halmstad ee galbeedka Iswiidhan.
– Waxaan maqlay dhawaaq yar, markaa ayaan is iri waa guguc ama onkod laakiin dhawaaqa wuu sii socday ka dib waxaa ruxmay guriga, sariirta ayaan ka kacay waxaana is weydiiyay waa maxay sidan, ayay tiri Margareta Danielsson oo ah haweeney ku nool xaafadda Haverdal ee degmada Halmstad.
Margareta ayaa sheegtay in ay mooday in gaar bas ah ama baldoosat wadada ka soo baxday in ay soo gashay gurigeeda iyada oo wax yaabo badan ku fekertay.
Gabar iyana la yiraahdo Lena oo ku nool meel 35 kiilo mitir waqooyiga magaaladda Kristianstad ayaa sheegtay in dhul gariirka ay halkaasi ka dareentay iyada oo sheegtay in sairrta ay la ruxantay ayna mooday in gaari kuwa xamuulka ah in uu soo jiiray qeyb gurigeeda ka mid ah.
Qeybo ka mid ah gobolka koonfurta ku yaalla ee Skåne ayaa iyana laga dareemay dhul gariirka saakay ruxay koonfur galbeed Iswiidhan.
Booliska iyo qeybaha badbaadada ayaa waxaa soo wacay shaqsiyaad ku kala nool gobolada Halland iyo Skåne oo uu toosiyay dhulgariirka saakay ku dhuftay koonfur galbeed Iswiidhan.
Reynir Bödvarsson oo ka tirsan jaamacadda Uppsala ayaa sheegay in dhul gariirada ay si aad u yar ugu dhacaan dalka Iswiidhan isaga oo sheegay in tobankii sano mar la dareemo isaga oo sheegayna in wax yeelo aysan geysaneynin sidaasi daraadeed aan laga wel welin.
Dhul gariirka ayaa xoogeysii waxuu ka dhacay badda gudaheeda iyada oo uu ka fogaa meelaha deeganada ee dadka ku nool yihiin.